Shirka golaha wasiirada Jubbaland oo looga hadlay qodobo muhiim ah (Masawiro)
Shirka golaha wasiirada Dowlad-goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa maanta ka qabsoomay guriga martida Jubbaland ee magaalada Kismaayo.
Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Mudane Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud ayaa shir guddoominaayey kulanka golaha wasiirada.
Muddadii shirku socday waxaa warbixinno laga dhegaystay qaar kamid ah wasaaradaha sida wasaaradda xannaanada xoolaha iyo wasaarado kale.
Arrimaha sida gaarka ah loogu lafo guray shirka golaha wasiirada Jubbaland waxaa kamid ahaa daryeelka bay’ada iyo ilaalinta deegaanka, xoojinta amniga iyo adkeynta nabadgelyada, xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta hay’aha Dowladd iyo tayeynta adeegyada ay bulshada u fuliyaan hay’adaha Dowladda sida wasaaradaha.
Markii shirku soo dhamaaday waxaa Jubbaland TV la hadlay wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Jubbaland Xirsi Jaamac Gaanni, wuxuuna sheegay in shirku u qabsoomay sidii loo qorsheeyey, wuxuuna hoosta ka xariiqay wasaaradaha iyo hay’adaha Dowladdu ay isla qaateen kor u qaadista shaqooyinka loo hayo bulshada Jubbaland.